DAAWO SAWIRRO: Madaxweyne Puntland ‘Deni’ oo maanta safar dibadda u ambabaxay, halkee buu aaday (Ogow Ujeedka)! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO SAWIRRO: Madaxweyne Puntland ‘Deni’ oo maanta safar dibadda u ambabaxay, halkee...
DAAWO SAWIRRO: Madaxweyne Puntland ‘Deni’ oo maanta safar dibadda u ambabaxay, halkee buu aaday (Ogow Ujeedka)!
Garoowe (Halqarna.com) – Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland, Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa Isniintii maanta safar shaqo ugu ambabaxay dalka dibaddiisa, gaar ahaan dalka Itoobiya oo uu ku hormarayo.
Garoonka diyaaradaha Gen. Maxamed Ashir ee magaalada Garoowe waxaa ku sii sagootiyey Madaxweynaha iyo waftigiisa Madaxweyne Ku-xigeenka dowladda Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash, masuuliyiin ka tirsan Goleyaasha dowladda, Saraakiil Ciidan, Saraakiil ka tirsan Madaxtooyada Puntland iyo masuuliyiin kale.
Madaxweynaha Puntland Saciid Deni, ayaa inta safarka dibadda uu ku maqan yahay wuxuu tagi doonaa dalal kale oo madax kala duwan uu kula soo kulmi doono.
Wax faah faahin intaa ka badan lagama haayo safarka Madaxweyne Dani uu ugu ambabaxay dalka Itoobiya iyo midka kale ee uu ku tagaayo dalalka kale ee caalamka.
Mar walba kala soco wararkii ugu dambeeyay Halqaran.com
Deni' oo maanta safar dibadda u ambabaxay